Yan Aung: Happy Old Year 2008...............
Happy Old Year 2008...............
Happyyyyyyyyyy Newwwwwwwwww Yearrrrrrrrrrrrrrrr!!!!
ဆိုတဲ့အသံတွေ တစ်လမ်းလုံးညံနေအောင်၊ တစ်မြို့လုံးလျှံနေအောင်၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးဝှမ်နေအောင် ကြားနေရတယ်၊ မြင်နေရတယ်၊ ခံစားနေရတယ်၊ တွေးသိနေရတယ်...
အားလုံး ကိုယ်စီကိုယ်ငှ တစ်စုံတစ်ခုကိုတော့ ဆုံးဖြတ်မိကြမှာပဲလေ...
'ဒီနှစ်ကစပြီး ငါ့ကိုယ်ငါ ဘယ်လိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်တော့မယ်...'
'ဒီနှစ်မှာ ငါဘာတွေရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်...'
စတဲ့ ပညတ်မတူပေမယ့် ပရမတ္တသဘောတရားအားဖြင့် တူညီနေတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်တွေ၊ စိတ်သစ်တွေနဲ့ လူသစ်တွေ ထွက်လာနေကြတယ်။ စင်မြင့်တွေပေါ်မှာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားတွေထဲမှာ၊ လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာ၊ လမ်းကြိုလမ်းကြား လေးတွေထဲမှာ၊ တိုင်းပြည်ကြီးတွေမှာ၊ တိုင်းပြည်ငယ်လေးတွေမှာ၊ မြို့ပြကြီးတွေမှာ၊ ကျေးရွာဇနပုဒ်တွေမှာ အို... ပြည့်လို့လျှံလို့ပေါ့...
ဘာသာရေး ထုံမွှမ်းသူတွေ၊ ကိုင်းရှိုင်းသူတွေကတော့ ဘာသာတရားရဲ့ အရိပ်အာဝါသကို ခိုမှီပြီး သတ္တ၀ါအပေါင်း အေးချမ်းကြည်လင်ကြစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာတွေ အလျှိုအလျှို ပို့သနေကြမယ် ထင်ပါတယ်...
တကယ်တော့ ၂၀၀၉ ဆိုတာ ၂၀၀၈ ရဲ့နောက်မှာ ဧက၀ှစ်ကိန်းတစ်ခု ထပ်တိုးလိုက်ရုံပါပဲ...
မနေ့က ၂၀၀၈၊ ဒီနေ့ ၂၀၀၉ အထွေအထူး ဘာများဖြစ်ပျက်သွားခဲ့မလဲ...
မနေ့ကလိုပဲ ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ နိုးထလာခဲ့ကြမယ်. မနေ့ကလိုပဲ ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာ အထူးထူးအဆန်းဆန်းသော အာရုံသစ်တွေနောက် တကောက်ကောက် ကျွန်တော်တို့ လိုက်ကြမယ်. ဖြားယောင်းကြမယ်. ဖြားယောင်းခံကြမယ်...
ဒီအရှိန်တစ်ခုဟာ တစ်ပတ်ထက် ပိုမခံတတ်ပါဘူး. ပြီးတော့လည်း အရင်လို ဒုံရင်းဒုံရင်း ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲအတိုင်း ဆက်လက်စီးမျောလိုက်ပါနေကြဦးမှာပါပဲလေ...
ဟက်ပီးနယူးရီးယားးးးးးးးးးးးးးးးး လို့ အားလုံးကြားအောင်၊ ရင်ဘတ်တွေပွင့်ထွက်သွားအောင် အားရပါးရ ဟစ်အော်လိုက်တာထက် နာရီလက်တံလေးတစ်ချက် ၁၂ ဂဏန်းပေါ်ကို အရောက်မှာ ၂၀၀၈ ဆိုတဲ့ ဂဏန်းတွဲလေးတစ်ခု ပြက္ခဒိန်စာမျက်နှာပေါ်က လွင့်စင်ကျပျောက်သွားတာကို ကြည့်နေလိုက်ရတာက ပိုပြီးလေးနက်အသက်ဝင်နေစေခဲ့သလိုပဲ...
နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ ကုန်ဆုံးချိန်ဟာ တကယ်တော့ ပျော်ရွှင်မြူးတူးစရာ ကောင်းလှသလို သံဝေဂရစရာလည်း အတော်ကောင်းပါတယ်.
ကိုယ်နဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံး လက်ပွန်းတတီးနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဆိုတဲ့ ပညတ်ချက်လေးတစ်ခု ကိုယ့်ဘ၀ထဲက ထွက်ခွာသွားခဲ့တာကို အနုပညာဆန်ဆန်နဲ့ ကြည့်တတ်ခဲ့မယ်၊ ခံစားတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်သိပ်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ အဆွေခင်ပွန်းတစ်ယောက် ကိုယ့်ဘ၀ထဲက အပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့သလိုပါပဲ... ခံစားကြေကွဲရစေတယ်.
၂၀၀၉ ကို ကြိုဆိုပါတယ်. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်နဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတူနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ကိုလည်း သိပ်ကျေးဇူးတင်တယ်.
သစ်လွင်နုပျိုမှုကလွဲလို့ ဘာအမှားအယွင်းမှ မမြင်သေးမရှိသေးတဲ့ နှစ်သစ်တစ်ခုကို ပျော်ရွှင်စွာ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ဖို့ရာ မခဲယဉ်းလှပါဘူး..
နှစ်ဟောင်းတစ်ခု အိုမင်းရင့်ရော်စွာနဲ့ မျက်လွှာလေးအောက်ချလို့ အဝေးကိုထွက်ခွာသွားခဲ့တာကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ၊ နားလည်ခွင့်လွှတ်တတ်လွန်းစွာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ချင်းစာသင့်ခဲ့တယ်လို့ မထင်မိဘူးလား မိတ်ဆွေရယ်...
တကယ်တော့ နှစ်ဟောင်းတစ်ခုမှာ အမှားအယွင်းမရှိပါဘူး. ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှာသာ အမှားအယွင်းတွေ ရှိနေခဲ့ကြတာပါ. ဒါကိုပဲ ၂၀၀၅ အမှား၊ ၂၀၀၆ အပြစ်၊ ၂၀၀၇ အရှုပ်ထုတ်၊ ၂၀၀၈ အသက်မ၀င်....... ဟော... ၂၀၀၉.... ဒီနှစ်ကတော့ ငါ့နှစ်ပဲလို့ ပြောကြဟောကြရောချနေကြတုန်းပါပဲ.... မကြာခင် ၂၀၁၀ လာဦးမယ်. ၂၀၀၉ ကို ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့လိုပဲ အတ္တနံရံတစ်ခုပေါ်မှာ လွယ်ကူစွာနဲ့ ဖောက်ခွဲမေ့ပျောက်ပစ်လိုက်ကြမှာပါပဲလေ...
နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ ကုန်ဆုံးချိန်ဟာ တကယ်တော့ ပျော်ရွှင်မြူးတူးစရာကောင်းလှသလို သံဝေဂရစရာလည်း ကောင်းလှပါတယ်...
နာရီလက်တံလေးကို စိုက်ကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေ တဖြည်းဖြည်းချင်း စိုစွတ်လာခဲ့ကြတယ်...
ကျွန်တော်အရာရာတိုင်းကို တန်ဖိုးမထားနိုင်၊ ဂရုမစိုက်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ၂၀၀၈ ဆိုတဲ့ နှစ်ဟောင်းလေးတစ်ခုကိုတော့ ခမ်းနားစွာ နှုတ်ဆက်ချင်တယ်...
၂၀၀၈ ဆိုတဲ့ ငါ့ရင်ထဲက နှစ်ဟောင်းလေးရေ...
ဒီနှစ်လိုပဲ မနှစ်ကလည်း ဒီလိုအချိန်မှာ ဒီလိုအေးမြနေခဲ့တယ်. ဒါပေမယ့် ဒီလိုအချိန်မှာ ငါဟာ ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုမှာ ထိုင်နေခဲ့ရင်း ၂၀၀၇ အကြောင်း ပြန်ပြောင်းစဉ်းစားနေခဲ့ဖူးတယ်...
အဲဒီ့တုန်းကတော့ ၂၀၀၈ ဆိုတဲ့ မင်းလေးက ငါ့ကော်ဖီခွက်လေးဘေးနားက တစ်ရှုးစာရွက်လေးပေါ်မှာ အခန့်သားနေရာယူထားခဲ့တာပေါ့...
မင်းကို ၁၂ ပိုင်း ငါပိုင်းခဲ့တယ်. တစ်ပိုင်းစီကို ၂ ခုစီ ထပ်ပိုင်းရင်း တစ်ရှူးစာရွက်လေးပေါင်းများစွာမှာ မင်းရဲ့ အခက်အလက်တွေကို ငါတပ်ဆင်ခဲ့တယ်...
မင်းဟာ ငါ့အတွက် လန်းဆန်းဝေဆာတဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်...
မင်းနဲ့အတူ ဒီနှစ်ထဲမှာ ဘယ်လိုဟာတွေကို ဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့ ရယူအကောင်အထည်ဖော်လိုက်မယ်လို့ တွေးတောဆုံးဖြတ်နေခဲ့ချိန်မှာ ငါ့မျက်ဝန်းတွေက ကော်ဖီခွက်ထဲက ကော်ဖီရည်တွေလို ညိုသွားလိုက်၊ မျက်နှာကြက်ပေါ်က မီးပွင့်လေးတွေလို လင်းလက်သွားလိုက်၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ မြင်နေရတဲ့ နှင်းမှုန်တွေထဲက ဓာတ်မီးတိုင်တစ်ခုလိုေ၀၀ါးသွားလိုက် ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်...
ဒါပေမယ့် အဆုံးသတ်မှာ မင်းနဲ့ငါ ပျော်ရွှင်စွာ၊ ပြတ်သားစွာ၊ ရဲရင့်စွာ၊ ခိုင်မာစွာ ပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့တယ်...
အပြန် ကားလမ်းမအလယ်တည့်တည့်ကနေ ပိုင်စိုးပိုင်နင်းနဲ့ ယုံကြည်ချက်ပြင်းပြင်း လှမ်းလျှောက်လာတဲ့ ငါ့ခြေလှမ်းတွေကို ငွေနှင်းမှုန်လေးတွေက နမ်းရှိုက်ဂုဏ်ပြုနေခဲ့ကြတယ်...
အဲဒီ့တုန်းကတော့ မင်းဟာ ငါ့ဂျင်းဘောင်းဘီအပြာရောင်လေးရဲ့ နောက်ဖက်ကျကျ အိတ်ကပ်လေးထဲမှာ ငိုက်မြည်းနေခဲ့တာပေါ့...
ဒီလိုနဲ့ပဲ စက္ကန့်ကို မိနစ်စား၊ မိနစ်ကို နာရီစား၊ နာရီကို ရက်စား၊ ရက်ကိုလစား၊ လကို နှစ်စားနဲ့ မင်းရဲ့ ပီပြင်ပြတ်သားခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လွှာတွေ တဖြည်းဖြည်းေ၀၀ါးခဲ့ရတယ်...
မင်းရဲ့ မနက်ခင်းတွေဟာ ငါ့မျက်ဝန်းတွေကို ထုံးစံအတိုင်း လာရောက်နမ်းရှိုက်ရင်း နိုးထနေစေခဲ့ပေမယ့် ငါ့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကတော့ သံပတ်ပေးခံထားခဲ့ရတဲ့ စက်ရုပ်တစ်ကောင်ရဲ့ ခြေထောက်တွေလို စေရာသွား၊ ထားရာနေဖြစ်ခဲ့ရတယ်....
မင်းရဲ့ ၀မ်းနည်းမျက်ဝန်းတွေ၊ ယူကျုံးမရဖြစ်တဲ့ ချိနဲ့အပြုံးတွေကို နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်မနက်ခင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ငါ့ရဲ့ မွေးနေ့မှာ တစ်ခါတွေ့လိုက်ရတယ်...
အဲဒီ့ကတည်းက ငါသိပ်ကို ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်...
တကယ်တော့ ငါဟာ လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း နှောင်အိမ်ထဲ ပြန်ဝင်နေခဲ့မိတဲ့ အကျင့်ပါနေတဲ့ ငှက်ငယ်တစ်ကောင် ဖြစ်နေပါရော့လား....
အဲဒီ့နောက်ပိုင်း ငါ မင်းနဲ့ သိပ်ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးနေခဲ့တယ်ဆိုတာ မင်းသိမှာပါ...
မင်းနဲ့အတူ ငါ့ရှေ့ရေးအတွက် တိုင်ပင်တယ်. မင်းနဲ့အတူ လေးနက်တဲ့ ဘ၀ဒဿနတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်. မင်းနဲ့အတူ ချိုမြတဲ့ ဂီတသံစဉ်တွေကို ဖန်တီးမွေးထုတ်ခဲ့တယ်. မင်းနဲ့အတူ ကဗျာချိုချိုလေးတွေ ထိုင်ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်...
ငါ သိပ်ဝမ်းနည်းတယ်. မင်းမှာ တစ်လပဲ အချိန်ရှိတော့တယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရချိန်မှာပေါ့...
မသွားပါနဲ့လို့ ငါတားချင်ပေမယ့်လည်း တားနိုင်ခွင့်မှ မရှိခဲ့တာ...
ဒီတော့လည်း နေရသမျှ အချိန်လေးအတွင်းမှာ မင်းအတွက် ငါ အကောင်းဆုံး နေထိုင်ပေးခဲ့တယ်. ဒီဇင်ဘာနှင်းတွေ ဝေနေချိန်မှာ ငါ မင်းရဲ့ မျက်နှာလေးကို စေ့စေ့ကြည့်ရင်း ငါ့နှလုံးသားကို မြင်အောင် ကြိုးစားကြည့်တယ်. ဒါ မင်းအသိ.. ဆောင်းလေလေးတွေ မြူးနေချိန်မှာ ငါ မင်းရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ ချမ်းမြေ့ကြည်လင်စွာ အိပ်စက်အနားယူရင်း ငါ့ဘ၀ရဲ့ အမောတွေကို ခေတ္တမျက်ခြည်ပြတ်စေခဲ့တယ်... ဒါလည်း မင်းအသိ...
ခရစ်စမတ်သစ်ပင်လေးတွေ အစီအရီထောင်လို့ ဓမ္မတေးသီချင်းလေးတွေ အေးမြချိုလွင်စွာ ပျံ့လွင့်စီးဝင်နေချိန်မှာ ငါ မင်းအတွက် ဖဲကြိုးအနီလေးတစ်ခု သစ်ပင်လေးတစ်ပင်နားမှာ ချည်ပေးခဲ့ဖူးတယ်. အဲဒါတော့ မင်းသိချင်မှ သိမှာပါ...
မကြာခင် လာတော့မယ့် ၂၀၀၉ ဆိုတဲ့ ဧည့်သည်တော်တစ်ယောက်ကို ကြိုဆိုဖို့ လူတွေ တက်ကြွလှုပ်ရှားနေချိန်၊ အ၀တ်အစားသစ်တွေ၊ ပစ္စည်းပစ္စယအသစ်တွေနဲ့ လူတွေလူတွေ ငေးမောပျော်ပါးနေချိန်မှာ မင်း ဘယ်လောက် အားငယ်လိုက်ရှာမလဲ....
ငါ မင်းအနားမှာ တစ်ချိန်လုံး ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာ မင်းသိမှာပါ...
အားမငယ်နဲ့ကွာ... ဒါဟာ ဘ၀ပဲ... ဒါဟာ အသစ်အဆန်းကိုမှ ခုံမင်မက်မောလွန်းတတ်ကြတဲ့ လူတွေရဲ့ သဘောသဘာဝတစ်ခုပဲ...
ငါလည်း အသစ်အဆန်းကို တွယ်တာတတ်တာပဲပေါ့... ဒါပေမယ့် ငါ့အပေါ် ကောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ ဘယ်သူကိုမဆိုတော့ ဘယ်နေရာ ဘယ်အခြေပဲ ရောက်နေပါစေ ငါ တန်ဖိုးထားမယ်၊ အလေးတယူပြုမယ်. ရှေ့တန်းတင်မယ်...
မင်း ငါ့အပေါ် ဖေးမကူညီ ရပ်တည်ပေးခဲ့ဖူးတယ်...
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက်ညမှာ ငါ မင်းရဲ့ ဆတ်ဆတ်ခါတုန်ယင်နေတဲ့ နှလုံးသားငယ်လေးကို ယုယစွာ ပိုက်ထွေးထားရင်း မင်းနဲ့အတူ တစ်ညလုံး ရှိနေခဲ့တယ်...
မင်းနဲ့ငါရေးခြစ်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေ မပြီးဆုံးသေးဘူး. ငါ ဆက်လက်သယ်ဆောင်ရင်း အကောင်အထည်ဖော်သွားမယ်.
အခုချိန်မှာ ငါတစ်စုံတစ်ရာကို သိပ်လွမ်းနေခဲ့တယ်...
မင်းနဲ့အတူ ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ခဲ့တုန်းက မျှော်လင့်ကိုးစားတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ငါ့ကို မော့ကြည့်အားပေးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဆိုတဲ့ မင်းရဲ့ပုံရိပ်လေးကိုပဲပေါ့...
အရောင်မှေးမှိန်စပြုနေပြီဖြစ်တဲ့ မင်းမျက်ဝန်းလေးတွေကို ငါမြတ်နိုးစွာ နမ်းရှိုက်ပါရစေ...
ငါ မင်းကို လိုက်ပို့မယ်နော်...
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ မင်းကို ပစ်ပယ်စမ်းပါစေ... ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ မင်းကို မေ့လျော့ချင်စမ်းပါစေ... မင်းကို ငါဘယ်လောက်ထိ တန်ဖိုးထားခင်တွယ်တယ်၊ ယုံကြည်လေးစားတယ်၊ ကိုးစားတွယ်တာတယ်ဆိုတာကို မင်း သိထားလိုက်စမ်းပါကွာ...
ဒါဟာ မင်းနဲ့ငါအတွက် တောက်ပလိုက်တဲ့ ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ အလင်းတန်းတစ်ခုပဲ...
ဒါဟာ တစ်ယောက်သောသူကို ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်နေတာဖြစ်ပေမယ့် တစ်ယောက်သောသူအတွက်တော့ နှုတ်ဆက်ခွဲခွာဖို့ အချက်ပြနေတာပဲ ဖြစ်တယ်...
ငါမင်းကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပွေ့ဖက်နမ်းရှိုက်ပါရစေ....
ဒီလှေကားထစ်လေးတွေရဲ့ အဆုံးမှာ မင်းနဲ့ငါ ထာဝရ ဝေးကွာရတော့မယ်နော်...
မင်းနဲ့ခွဲခွာရတော့မှာမို့လို့ ငါသိပ်ဝမ်းနည်းသလို မင်းကြောင့် ငါ့မှာ ဘ၀အသိတရားတွေ တိုးပွားလာခဲ့ရလို့လည်း ငါ သိပ်ဝမ်းသာတယ်...
၀မ်းနည်းဝမ်းသာမျက်ဝန်းတွေနဲ့ပဲ မင်းရဲ့ မျက်ရည်လေးတွေကို ငါ မြတ်နိုးစွာ ကောက်ယူလိုက်တော့မယ်ကွာ...
Happy.... Old.... Year.... 2008!
Credit: The above picture is used from here.
မင်းနဲ့ငါရေးခြစ်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေ မပြီးဆုံးသေးဘူး. ငါ ဆက်လက်သယ်ဆောင်ရင်း အကောင်အထည်ဖော်သွားမယ်...
2008 ကို သနားသွားပြီ.... :(
အဲလို တူနေလို့... ခင်ဗျား ရေးတာ ကောင်းတယ်ဗျာ.. လို့ ပြောတော့ ... ကိုယ်ကြိုက်လို့ ကောင်းတယ် ပြောတတ်တဲ့ လူမနောနဲ့များ ဖြစ်နေမလား...
အတော်များများက အသစ်ကို ကြိုဆိုဖို့ပဲ သတိရပြီး ကုန်ဆုံးခါနီးတဲ့ အဟောင်းကို ဘယ်လို အကောင်းဆုံး နှုတ်ဆက်မလဲ ဆိုတာ အတွေး နည်းနေကြတယ်လို့ ထင်မိတယ်...
ဘာပဲ ပြောပြော နောက်နှစ် ဒီအချိန်ကျရင်လည်း ဒီလိုပဲ နောက်တစ်ခါ ဟက်ပီး နယူးယီးယားလို့... ရူးရူးမူးမူး ထပ်အော်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြဦးမှာပဲဗျာ...
ဒါကြောင့်လည်း ပုထုဇနော ဥမ္မတကော ဆိုပေသကိုးဗျ ... နော...
kham sar ya tal byar :(
WOW, KYA, suchalong writing withalot of emotional thoughts for the year come and gone!!! ha ha…that’s why u becomeagood writer…for me, I do not think much about the new year day except that I would stay up for the new year withagood mood..of course there sure are good foods and my favorite music too…as I somehow believe and hope that all the days in 2009 would be like this if my new year day is enjoyable…not that I am superstitious though…I do not even read horoscope during these days although I did that when I was younger..ha ha…
OK, just to wish u “Happy New Year “ and let u know that i am still checking out regularly and reading ur blog although I don’t write comments these days…to be honest, I scan it quickly if it is too long and I don’t have enough free time…
BTW, my students like Creative Music which u have posted some time back… I play it for them during the break time during my lecture and they even asked me to send the link so that they could show it to their friends…may be they are somehow exhausted and bored with my teaching withalot of equations and calculation…ha ha… please post some more music pieces and also post some writings that show your humorous sense too… I enjoyed reading ur humorous writingsalot …
အဟင့်..အဟင့်.. ရွှတ်.. ၀မ်းနည်းလိုက်တာ..။ ကိုရန်အောင်ရေးတာ တကယ်ခံစားရတယ်..။ ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ .. တကယ်တော့ ၂၀၀၉ ဆိုတာ ၂၀၀၈ ကို ပုံပြောင်းထားတာပါ..။
ဘလော့ဂ်နာကျ... လေပွသောခါ... (မော်ဒန်တျာချင်း)
ဘလော့ဂါဗီဇနဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ အကြောင်းအရာများ....